Mvura inogona kuendeswa kunguruve kuburikidza nemunyatso, mbiya kana yekumwisa mvura.
KUWANISWA NEMVURA KUNA NGURUVE Tiri panguva iyoyo yegore apo nguruve dzinogona kukanganisika zvakanyanya nekuda kwemamiriro ekunze anopisa. Izvi zvinokanganisa zvakanyanya kana mvura ikadziviswa. Ichi chinyorwa chine ruzivo rwakakosha uye irworwo runyorwa rwe'inofanira kuita 'kuona huwandu uye mhando yewa ...
Maitiro ekugadzira yako yehuku yekudiridza
Midziyo yauchazoda: 1 - Yehuku Nipple Waterer 2 - ch Inch Chirongwa 40 PVC (Kureba kunogadzwa nenhamba yemazamu) 3 - ¾ Inch PVC Cap 4 - PVC adapta (3/4 Inch slip kune ¾ Inch pombi tambo) 5 - Brass Swivel GHT Inokodzera 6 - Rubha tepi 7 - PVC Cement 8 - 3/8 Inch Drill Bit 9- PV ...
Nzira yekupfuya nekupa chikafu nyama, huku kana dhadha
Nhanho yekutanga ndeyekuona kuti huku yega yega ine nzvimbo inodziya, yakaoma, yakachengetedzwa kana bhokisi rematendere raanoisa mazai ayo. Izvi zvinofanirwa kunge zviri padyo kana pasi kuitira kuti nhiyo dzikwanise kupinda nekubuda zvakachengeteka. Isa huswa mubhokisi rematendere kuti mazai agare akachena uye achidziya uye kudzivirira kutsemuka. Huku inoda ...
Automated feed trough inovandudza kudyara kwehutano nekurumura nguruve kuita
Zuva rega rega, iwe unofamba nezvinetso zvekurima nguruve - uchiita basa rakawanda nebasa rinoita serishoma, zvese uchiedza kugadzirisa kuita kwenguruve. Kuve unobatsira kunoda iwe kuti ubudirire, uye zvinotanga nekutora kudzora kwekuyamwisa kudyara kwekudya. Heano zvikonzero zvina zvekutora s ...